Rayrayn waa imanaysaa. BNL Ministries - so01
In Malaakii 4:5-6 Ilaah wuxuu yidhi wuxuu noo soo diri lahayd Nebi Eliiyaah intaanay iman maalinta Rabbiga oo weyn oo cabsida badanu. Marka Ciise ayaa la weydiiyay sababta macallimiinta ayaa sheegay in Eliyaas horta yimaado lahaa, wuxuu iyagii u sheegay kulli wixii Eliiyaah iman lahaa oo wax walba ayuu soo celin. Markaas wuxuu iyaga ku sheegay in Eliiyaah horay u yimid oo loo aqoonsaday Yooxanaa Baabtiisaha sida isaga. Marka Yooxanaa la waydiiyo "yaad tahay?" ayuu yiri "Anigu waxaan ahay codka mid cidlada kaga qaylinaya". Tani waxa ay ahayd Ishacyaah 40:3. Sidaas daraaddeed nin subkay Ruuxa Eliiyaah waa inuu yimaado oo "soo celiyo". Waxaan aaminsanahay William Branham wuxuu ahaa nebigii si loo soo celiyo wax walba in baxeen off galay qalad. Waxaad u malayn kartaa in tani ay u muuqato wax aan caadi ahayn, laakiin Ilaah wuxuu cadeyay waqti iyo waqti mar kale in tani aysan ahayn wasaarad caadi ah, by siinaya aragti, falalka mucjisada ah, iyagoo kiciyey kuwii dhintay (Ka dib markii shahaado by dhakhaatiirta). Waanu saxnaa wakhtigaas of soo celinta Ciise - Maalintii ugu cabsida badan oo Rabbigu.
Mid ka mid ah habeenkii ee 1946 malaa'igtii Rabbiga kulmay Walaal Branham waji ka waji oo intuu u warramay ayuu ku amray si ay u qaataan hadiyaddii bogsiinta rabbaaniga ah dunida oo dhan. Malaa'igtii baa u sheegay wuxuu la siin doono laba calaamadaha si loo caddeeyo inuu Ilaah ka soo diray. Waxa uu dhawaan ogaaday in calaamadda koowaad ay ahayd, by dabiicad ahaan, jir ahaan daalinta. Waxa uu qabtay gacmihii dadka buka, iyo dareen ku vibrations cudurada dilaaga ah ee ay, ay u guuraan ilaa uu gacanta ka dibna si qalbigiisa.
In kuwa maalmihii hore ee wasaaradda ayuu ku baryayaaye lahaa waayo, boqolaal qof habeen kasta ilaa uu dareemay wareer oo wuxuu ku dhowaan lahaa inuu ku dhaco laga bilaabo daal. Markaas calaamadii labaad yimid oo waxaa soo baxday in ka badan jir ahaan daalo ka badan ay calaamada hore. Markii qaybtii subkidda oo Ruuxa Quduuska ah wuxuu bilaabay inuu ogaado dhibaatooyinka dadka, aragti kasta isticmaalo wax badan ee uu tamarta in uu kaliya ku baryi karo qiyaas ahaan 15 ilaa 20 qof habeen kasta. Malaa'igtii waxay ku tidhi haddii uu ku heli karo dadka si ay isaga u rumaystaan, cudurka ma adkeysan karaan salaadda uu. Markii uu lahaa mudaaharaaday in dadka aan isaga rumaysan lahaydeen sababtoo ah xaaladdiisa hoose, ka dibna Ilaah uu ku daray labada calaamadaha caddaynta komishanka.
Tiir dab ah - Houston 1950.
In Houston, Texas ee January 1950, sawir cajiib ah ayaa la qaaday by Studios Douglas ah. In sawirka ayaa waxaa u muuqday iftiin ah ka sarreeya madaxa Walaal Branham ee halo sida foomka. Negative ayaa la baaray by George J. Lacy oo ahaa imtixaankii FBI waayo su'aalo dukumeentiyada, si loo go'aamiyo in ama aan nuurka ayaa laga yaabaa natiijada soo-dhowaynta aan habbooneyn, horumarinta ama retouching. Baaritaanka ayaa u adeegeen si buuxda u xaqiijiso xaqiiqda in foomka halo ah, waxaa sababay iftiin garaacid filimka. Sawirkaan ayaa deldelay ee Hoolka Farshaxanka ee Washington DC, sida kaliya ee paranormal qof weligaa la sawiray.
Dejisan (Ingiriis) 53-0509 Pillar of Fire. - William Branham
Bal eega, maalinta weyn oo cabsida badan oo Rabbigu intaanay iman waxaan idiin soo diri doonaa Nebi Eliiyaah.
Oo isagu aabbayaasha qalbigooda ayuu u soo jeedin doonaa carruurta xaggooda, oo carruurta qalbigoodana wuu u soo jeedin doonaa aabbayaasha xaggooda, si aanan u iman oo dhulka inkaar ugu dhufan.
Wax yar ka hor qorraxda Febraayo 28 1963, daruur si weyn u qurux badan oo dahsoon u guuray xagga woqooyi oo ku yaala Arizona USA. Laba wargeys ayaa sawirka qaaday iyo warbixin ee ifafaale this la yaab leh. (Science Magazine 19/4/63 iyo magazine Life 17/5/63) Sababta danta waxay ahayd in daruur weyn wuxuu ku jiraa samada buluugga ah at sare sare taas oo qoyaan jirin si ay u sameeyaan daruur. No sharaxaad macquul ah ayaa la siiyey by Weydiimaha cilmiyaysan u galay, laakiin aan la garanayn aduunka waxa ay ahayd on Dec 22, 1962, laba bilood ka hor daruurtii u muuqatay Walaal Branham waxay heshay aragti taas oo uu u sheegay kaniisaddiisa gudaha Jeffersonville. Tan waxaa lagu duubay cajalad "Tani waa waqtiga ugu dambeeya, Sir?".
Walaal Branham waxaa ugaarsanaya ee buuraha agagaarka Tucson, Arizona, marka dhacdooyinka in uu aragtida si lama filaan ah u dhacay. Toddoba dhibcood oo yaryar ayaa u muuqday oo cirka kor ku xusan isaga, sida dhibco kuwan noqday ka weyn, ahraamta ah toddobadii malaa'igood isaga hor taagnaa. Waxay isaga u dhiibeen amar inuu u muujiyo toddobadii shaabadood kitaabka Muujintii. In daruurtii waa wajiga Masiixa.
Dejisan (Ingiriis) "Is this the sign of the end Sir"
Ka akhri account buuxsama...
Ma jiraan iskutallaabta ay ku qodbeen. Meeshii madax xanuunka.